Waa maxay jeermisku waa inuu ogaadaa heerka maareynta dhulka ee LADM - Gofumed
Janaayo, 2014 cadastre, Geospatial - GIS, Maamulka Land
Waxaa loo yaqaan LADM Mashruuca Maamulka Maareynta Dhulka, kaas oo u suurtagashay inuu ISO 19152 ka noqdo 2012.
Ma aha software, laakiin waa qaab fikradeed oo muujinaya xidhiidhka u dhexeeya dadka iyo dhulka; Qiyaasida waxa ka muuqda waddan kasta waa mid kala duwan oo takhasus leh; waa nidaam la taaban karo oo wax ku ool ah oo ku jira 2014 Cadastre loo aqoonsaday inuu yahay abastracto. Waxay raadineysaa in ay ka fogaato dib-u-soo-celinta iyo dib-u-hirgelinta hawlaha isku midka ah iyada oo la adeegsanayo saldhig udubdhexaad ah oo fududeynaya hay'adaha si ay ula xiriiraan adeegyo heerarka caalamiga ah.
Ogow in juquraafi iyo dadku ku xiran yahiin geomatics waxay u baahan yihiin inay ogaadaan sida loo tarjumo qaabka loo tarjumo qaababka, waxaan qabtaan layligan si ay u sharxaan asalka jaangooyadan xilligaas marka loo eego sida CCDM.
Waxa xiiso leh in qayb LADM ee fudud sigaarka ay sawirka ku in maamulka dalka waa beddelmi ah muddo fikradda uusan waxba iska badalin in kumanaan sano:
Had iyo jeer waxay ka koobnaayeen xiriirka ka dhexeeya ninka iyo dhulka. No arrinta dhaqanka halkaas oo la falanqeeyay, taariikhda noo muujinaysaa wax la mid ah, dadka, sida ay dhacdo in Aadan iyo Xaawo ee gobolka comunero waxaa igmado si ay u maareeyaan Garden of Eden, xaq u leeyihiin inay gudaha ahaan, mas'uuliyadda waxa uu jiro, iyo xannibaadyada aan la cunin ee laga mamnuucay geedo mamnuuc ah iyo shuruudaha la wareegidda haddii ay dhacdo in aan loo hoggaansamin.
beerta in hadda loo yaqaan shay dhuleed (BAUnits) la a ratio xuquuqda (RRR) ula soo galaan, ku xiran dadka (Party) by Source iyo noocyo kala duwan oo wakiil cidda aan ollogga (Units Spacial).
Runta waxa ay tahay sida nidaamka maamulka ee horay xuquuqda hantida, waxaa jira kiisas adag oo heer-record laakiin mar walba waxaa sugaya model matalaad ay yihiin xaaladaha sida:
lamaane A leh xiriir 60% -% 40 of wanaagsan in uu yahay guri 23 ah ee dabaqa 4 ee dhismaha ah in ay sidoo kale ka mid ah xaq u leeyahay in labada meelaha baabuurta la dhigto ee 1 dhulka hoostiisa oo ku qumman guryaha is-kaashatada la dhammaan dadka deggan dhismaha ololeeya ee heer kasta iyo goobta BBQ dabaqa siddeedaad ah. Sharci ahaan waa wax sahlan, kaliya nooca warsada nafteena sida aan u qaabeeyaan in 3D diiwaanka, ama ugu yaraan 2.5 D.
Iyadoo LADM la raadinayo, in habka lagu qeexayo fikradda maamulka maamulka xuquuqda dhulka ee qalabka IT-ga waa isku mid. Sababtoo ah ganacsigu waa isku mid, waxay ku kala duwan yihiin qiyaasta yar waa habka iyo nidaamyada ay si gaar ah u leeyihiin waddanka ama anshaxa. The lagu daydo xamili caado yar ka dhigaysa in ay u muuqdaan in LADM waa la ruxruxo ah xidiguhu computer oo kaliya, maxaa yeelay, laga yaabee UML Qaabaynta fasallada iyo xidhiidhada si kastaba ha ahaatee, waa masuuliyada sahmiyaha la soo jeediyey ee 2014 Cadastre: «Habeyn nolol dheer».
Sidaas daraadeed, waa nooc ka mid ah macnaha juquraafiyeed ee xoogga saara hawlaha ugu muhiimsan ee maamulka dhulka:
Hayso waxyaabaha - Sujet - Xidhiidhka saxda ah ee la cusbooneysiiyay (P - RRR - RO)
iyo inaad bixiso macluumaad ku saabsan diiwaankan.
Sidoo kale model wuxuu doonayaa si loo fududeeyo simayo cadaadis farsamada waa mid ka mid ah gacanta dalab (Internet, database-da'ayeen, lagu daydo caadiga ah, shati il ​​furan oo GIS) iyo marka labaad baahida adeegyada in biirsadaan technology this (dawladda elektarooniga ah, horumar waara, waraaqo elektaroonik ah iyo is-dhexgalka xogta dadweynaha iyo nidaamyada). Mid ka mid ah faa'iidooyinka LADM waa in lagu beegi karaa dal kasta, iyadoon loo eegayn sharciga, kala hay'adaha of cadastre iyo diiwaanka, ama nooca qalab loo adeegsado qalabaynta. Wuxuu soo jeedinaya fasalada caadiga ah, oo halkaas waxaad ka dhigi kartaa fasalada gaarka ah ee dalka laakiin dhamaadka fikradda waxaa lagu taageeray.
guul weyn oo LADM waa in la xiriirinaya dadaal tacliimeed marayo dadaallo berdaha for simayo in mar hore jiray, sida Linz iyo LandXML of Australia / New Zealand, National System Integrated Land of Americans (FGDC ka hor), saamiyada Xaqiijinta Guddiga Yurub ee Sayniska iyo Tiknoolajiyadda (COST), Guddiga ISO / TC211 ee OGC iyo, intaa ka sarreeya, kufilan meelaha ku jira xaalad sare. Qaybta adag ee samaynta heerkulku waa soo bandhigista ama dib u soo kabashada waxyaabaha kale ee horeba u takhasusay.
La berdaha oo ku dhashay 2002, wuxuu isku dayaa in uu ku habboonaado dadaalkan oo loola jeedo waxqabadyo dhowaan la mid ah sida Kiiska Kusoo dhawaanta iyo fikradda IDE ee xoogga u dhow 2003. Sayidka in talaabooyinka gaagaaban LADM ka maraa daqiiqado kala duwan ee bandhigga, dooda iyo qabsashada versions kala duwan qaadashada magaca magaaladii ay ahaayeen presentnadas, si ay u noqdaan 19152 ISO ah 2012 ah:
Bishii Abriil ee 2002 suurtogalnimada in wax la qabto ayaa la kiciyaa markii ugu horeysay.
Bishii Sebtembar ee 2002 waxaa lagu soo bandhigayaa OGC version 1 oo loo yaqaan Noordwijk, ugu dhakhsaha badan Delft oo ku jira Workshop COST.
Bishii Maarso ee 2003 version 2 lagu magacaabo Paris, sanadkaas oo ku yaal FIG iyo taariikhdaas OGC waxay ku dhawaaqday LPI
Bishii Sebtembar 2003 wuxuu soo bandhigaa nambarka 3 oo lagu magacaabo Brno, Poland. Waqtigan xaadirka ah ee dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee 3D ee xajinta cadastre ayaa lagu daray. Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay Adeegga Macluumaadka Dhulka ee Yurub ee EULIS.
2004 4 oo la yiraahdo Bamberg, waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhacdooyinka FIGE ee Jarmalka iyo Kenya.
2005 waa nooca 5 lagu magacaabo Qaahira, ee dhacdooyinka FIG ee Masar. Waqtigaas, heerarka ay OGC ku maareysey Guddiga ISO / TC 211 ayaa la isku daray; Inkasta oo gudigani ay daabaceen wax ka badan heerka 50 ee xiisaha weyn ee kuyaala goobaha dareenka, LADM waxay halkan ka qaadataa labo: Geometry iyo Topology). Sidoo kale taariikhdaas waxay noqonaysaa tafaasiisha xogta cadawga ee Inspire.
2006 wuxuu soo bandhigayaa nooca 6 oo loo yaqaan 'Moscow', kaas oo ah nooca aan ku hadalnay Geofumadas ee maqaalkan «habka caadiga ah ee cadastare«. Tani waxay ka mid tahay dhismaha RRR iyo qaybta qashinka waxaa si gooni ah loogu sharaxay fasal buuxa.
Laga soo bilaabo 2006 ilaa 2008 dadaalku waxa uu diiradda saarayaa aqoonsiga sida caadiga ah.
Bishii Oktoobar ee 2006 waxay horey u soo bandhigtay Version 1.0 inkastoo taariikhdaasi loo yaqaan CCDM (Core Cadastral Domain Model).
Hannaanka sameynta heerbeegga ISO, iyada oo loo marayo shirar kala duwan oo wadahadal ah, kordhin iyo qeexitaan gaar ah ee claeses; waxay ku dhammaaneysaa 2012 iyadoo la adeegsanayo falsafada dhakhtarka ee Chrit Lemmen ee 2012.
Weli waxaa jira wax badan, dhowr dal oo horay u qaatay calanka, inkastoo wax badan ka hor ayaa weli. Ka dib markii dadaal simayo waxa uu ahaa geedi socodka ka mid ah fulinta iyo degtey si dhab, taasoo xiriir la SPOT (Joint Research Center of European Commission) iyo UN-HABITAT (Wakaaladda Qaramada Midoobay ee Degsiimada Aadanaha) ee ku hawlanaa mashaariicda lala maareynta dhulka. Iyada oo ay taasi waxaad arki tusaalayaal soo bixitaankii dal oo kala duwan, u sarreeya ay dhacdo STDM ah (Sanad Social Domain Model) waxaa loo arkaa takhasuska ah LADM, by FAO waxaa u Flossola iyo Honduras noocooda SIGIT hadda isha ku heysa inay fuulaan SINAP.
Muujinta maqaalkani waa inaan isku daynaa in aan fahanno asalka LADM ee ku salaysan nidaam garaafeed. Waxaan isku dayayaa in ay isticmaalaan midabo la mid ah fasalada model ah, horey u ansixiyey kala iska caadi ah in jaalaha ah dhanka sharciga ah, qofka cagaaran, walxaha buluug ah, in casaan iyo topology muuqaalka guud ee dhulka iyo guduud. Xaqiiqda isticmaalka calaamadaha ayaa ina keenaya xiriirro dhowr ah oo ka dhaxeeya ururada laakiin waan ku adkeysanayaa; Waa inaan barnaa si aan u fahamno qaababka. Adigoo moodada gudbinaya sheyga, macnaha ayaa la muujiyay.
[hsmap magaca = »ladm»]
Hay'adaha ugu waaweyn.
Nidaamka wuxuu ka bilaabmayaa xiriirka ka dhexeeya saddexda hay'adood ee waaweyn:
Daneeye (Mawduuc), sida caadiga ah ee lagu qeexay Xisbiga
Sharciga sharciga ah, ee kiiskan ka saaraya fikradda asalka ah ee qashinka cadastaroolka ah waxayna qaadataa shey dhuleed. Heerka waxaa la yiraahdaa BAUnit, iyo joomatari Jaleeriyada Qaybta.
Sharciga, xiriirka la xidhiidha shakhsiga shayga, ee heerarka lagu qeexay sida RRR.
Tusaaluhu wuxuu isku xiraa habka ilaha. Tani waxay noqon kartaa dokumenti ama xaqiiqda; waa xaqiiqo dhab ah. Inta soo hartay waa kiisas suuragal ah:
Ma aha oo kaliya mulkiilaha, laakiin koox ka mid ah dhaxlayaal, mid ka mid ah xabsi daa'in,
Qorshuhu wuxuu leeyahay guri, laakiin wuxuu ku yaalaa warqad mana lahan wax dareen ah,
Wareegtada lama go'aamin, laakiin boqolkiiba boqol ee sharciga ah ... mid ka mida walaalaha ayaa hore u iibiyay xuquuqdiisa afar qof,
Qaybtan ayaa lagu iibiyaa waxay leedahay munaarad taleefan oo macaamiisha ah oo leh adeeg server ah,
Qeyb ka mid ah goobtu waxaa saameeya aag la ilaaliyo oo leh nidaam khaas ah,
Mid ka mid ah walaalaha waa ilmo yar, sidaas darteed waxaa sharci ahaan matalaya hooyadiis gay ...
Haddii uu jiro ama aan lahayn khariidad, ha ahaato mid sharci ah, ha ahaato ama haddii ay tahay iyada oo la raacayo habraacyada, waa xaqiiqda jirta. Sidaa daraadeed, LADM waxay aqbashaa xaqiiqda dhabta ah ee lagu diiwaan geliyo hab xakamaysan, oo muujinaysa xaaladda jidheed iyo kan sharciga.
Xisbiyada danaynaya (Xisbi)
Fiiri in halkaan mawduuca "maadada" loo fidiyo dadka kala duwan ee soo dhexgalay macaamilka. Sidaa darteed waxaan haynaa:
Qofka shakhsiga ah
Qofka sharciga ah, sida kiiska hay'ad ama shirkad
Kooxaynta dadka, sida kiiska koox asal ah, urur, koox dhaqaale, iwm.
Qofka ama hay'adda caddaynaysa xaqa, sida kiiska garyaqaanka
Qofka ama hay'adda caddaynaysa deynta, sida kiiska bangiga ama hay'ad maaliyadeed
Qofka sameeya dukumiintiga cabbirka, sida sahamiyaha.
Xiriirka xuquuqda (RRR)
Halkan, cadastiga dhaqameed, waxa uu ahaa uun nooc ka mid ah muddada. Hase yeeshee, qaabkani waa la kordhiyaa si shuruudaha kala duwan ee xiriirka sharciga iyo miisaaniyadaha maamulka loo habeyn karo:
Saameynta, kuwaas oo noqon kara Xayiraadaha, Sifooyinka iyo Waajibaadka.
Xiriirka kireysiga leh ilaha.
Halkaan waxaa jira heerar kala duwan oo kala duwan, laakiin dhammaan qeybaha aasaasiga ah ee loo yaqaan "unit management" (BAUnit). Fiiri in tani ay tahay sheyga sheyga, ha ahaato ama aan haysano khariidad ama dukumeenti.
Tani waa sababtoo ah xaqiiqda waxaa jira shey, kaas oo si tartiib tartiib ah loo diiwaangelin doono, laakiin qaybta BAUnit ee qaybtaas iyo tan ugu horreysa waa dhacdooyinka "aan la daba galin":
Shey aan xaqiiq ahayn, taas oo ah, taas oo laga yaabo in laga saaro goobaha, sida kiiska guri guurguurta, antenna taleefanka, iwm.
Aqoonsi ee saldhigga ganacsiga
Dukumiinti aan daba-marin
Cinwaanka jirka ah oo qeexaya guri ku yaal dhismo, tanina waxay ka baxsan kartaa heerka dhismaha ee dhismaha.
Kadibna waxaa jira BAUnits oo leh aqoonsi qaas ah, kuwan ayaa ka mid noqon kara:
Goobta aan nidaamsanayn (qayb ka mid ah xaafadaha), oo noqon karta dhibic, qodobbo iyo xuduud.
Qodobka qaabaysan, oo noqon kara unug, ama dhowr ah oo la xidhiidha hal hanti.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka la qabsashada qaabka LADM waa in aysan jirin wax xog ah oo aan la sugi karin, ma jirto cadastar wanaagsan ama mid xun, oo kaliya xaqiiqda mataleysa. Waaxyaha maamulka ayaa jira waxaana laga wanaajin karaa saxnaanta:
Saldhig ka mid ah canshuur bixiyayaasha degmada oo ah waraaqaha kaliya ee lagu dhajiyey Excel.
Later waxay lahaan karaan isku-duwid, iyada oo ay tahay calaamad muujinaysa caleemo qoto-dheer oo ah xeelad caadi ah laakiin sax ah.
Kadibna waxaad yeelan kartaa sawirro, laakiin ma leh qadar sare.
Wax kasta waxay ku xiran tahay aqoonsiga jihada ah ee qorshaha, oo leh heerar kala duwan oo matalaad ah sababo fudud "xaqiiqda muuqaalka ah shayga waa hal". Waxa kale oo muhiim ah in aysan ahayn oo keliya sharciyada gaarka ah ee la aqoonsan yahay, laakiin sidoo kale sharciyada dadweynaha, sida marka la eego xaalad la ilaaliyo ama xarumo xayawaan ah oo lagu qeexay sharciyo kala duwan oo ah aag daadad keenaya saamaynta saamiyada.
Tani waa noocyo taxane ah oo khaas ah, taas oo u oggolaaneysa qeexida noocyada kala duwan ee shaxanka qaaska ah ee isla shay, isla markaasna waxay ku xiran yihiin ilaha.
Halkan waxa muhiim ah in cutubka ugu yar ee cabbirku yahay dhibic, kaas oo ah mas'uuliyadda daraasadda. Xaaladaha kala duwan ee 2D iyo 3D.
Marka laga hadlayo laba cabbir, hal dhibic, ka dibna xuduudaha xiriirka arc-node ka dibna qaabka joomatariga la xiray. Waxaa sidoo kale jira 3D inkasta oo halkan ay tahay xaalad kale oo ah shay 3D ah oo aan ka koobnayn weji.
Isku xirka matalaadda ballaadhan ee loo yaqaan 'topographic representation' ayaa ah iyada oo la tixgelinayo, inay mar walba noqdaan dukumiinti qeexaysa qeexitaan weyn oo aan lagu soo koobi karin qaybta cadawga oo qayb ka ah xaalad.
Gebogebada, LADM waa heer ay tahay in la ogaado. Waa wax ka soo horjeeda caqligu soo kiciyay ee 2014 Cadastre oo aan horey u soo qaadnay; inkastoo guulo badan oo ka mid ah qaybta tiknoolajiga iyo tacliinta leh caqabado badan oo ka mid ah qaybta hay'adaha iyo qaybaha.
Post Previous«Previous Waxa la sameeyo haddii iPad la xado
Post Next Saadaasha 2014 ee macnaha geofumado: Paul RamseyNext »
8 Jawaab ah "Waa maxay gaasku waa inuu ogaadaa heerka maaraynta dhulka ee LADM"
Dib-u-dhajinta TALOOYINKA WAA MAXAY TAHAY sawir-gacmeedka http://es.slideshare.net/galvarezhn/el-ladm-implementado-utilizando-interlis
Emmanuel Catastro Lerma Mexico isagu wuxuu leeyahay:
ma i siinayaan sharraxaadda marka aan u guuro jiirka muraayadaha
Waad ku mahadsantahay wadaagista !!! bogga quruxda badan
Dib-u-dhisto munaarado isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaad heli kartaa ppt ee muuqaalka sawirka
Dhab ahaantii, moodelku wuxuu la jaan qaadayaa waddanka. Haddii waddan go’aansado in xogaha qaar aysan isticmaali doonin ... ma adeegsanayo.
Waxa ugu muhiimsan waa in qaabka xogta loo isticmaalo habka loo isticmaalo xogta ku habboon.
David Rojas isagu wuxuu leeyahay:
Haddii ay marwalba adag tahay Peru si ay u gasho guryaha si ay u helaan macluumaad lab ah oo macluumaad ah, helitaanka dhammaan macluumaadka laga codsaday LADM waa mid aad u adag. Iyo xitaa dhib badan in la helo xogta beeraha ee Callao.
Boggaaga boggu waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, sidaa daraadeed shaki kuma jiro in kambiyuutarkaasi uu ku jiro faylasha 20minutos, adiguna waxaad tahay qof daacad ah.